Apple te-hanala ny teny miafina ao amin'ny macOS noho ny tenimiafina | Avy amin'ny mac aho
Apple dia miasa mankany amin'ny ho avy tsy misy teny miafina miaraka amin'ny fampiasa "passkey" iCloud Keychain vaovao izay naseho tao amin'ny WWDC 2021. Tamin'ny fivorian'ny WWDC antsoina hoe "Mandehana mihoatra ny tenimiafina", Apple dia niresaka momba ny fiasa vaovao antsoina hoe "tenimiafina amin'ny keychain iCloud." Azo ampiasaina ny fizahana amin'ny macOS Monterey, saingy mbola tsy vonona amin'ny kinova feno io.
Ny lahasa vaovao amin'ny fanandramana amin'ny macOS Monterey, dia miantoka izany amin'ny fiasa vaovao "Teny miafina ao amin'ny keychain iCloud", Apple dia mandroso amin'ny ho avy tsy misy tenimiafina. Raha ny tena izy, ny lakile fanalahidy dia tsiroaroa tsy miankina sy daholobe mifototra amin'ny fenitra WebAuthn. Miasa ho toy ny lakilen'ny fiarovana fitaovana izy ireo, saingy voatahiry ao amin'ny iCloud Keychain.
Midika izany fa mpampiasa tsy mila mitondra fitaovana enti-miasa miaraka amin'izy ireo izy ireo: Ny Mac sy ny hafa dia hiasa toy ny teny miafina. Mihoatra noho izany, ny teny miafina dia hiara-mifindra amin'ny fitaovana marobe, midika izany fa azo averina na dia very aza ny mpampiasa iray amin'ny fitaovany. Raha ampitahaina amin'ny tenimiafina nentim-paharazana, ireto tenimiafina ireto dia manome tombontsoa azo antoka amin'ny fiarovana. Tsy azo vinavinaina izy ireo, tsy azo ampiasaina indray amin'ny serivisy ary tsy mora tohina amin'ny phishing na ny fandikana data.
Ho an'ireo mpampiasa, manolora safidy mora sy azo antoka amin'ny tenimiafinao. Rehefa apetraka dia tsy maintsy ataon'ny mpampiasa rehetra ny manamarina ny Face ID mba hidirana. Ao amin'ny iCloud Keychain dia hampiasaina amin'ny toerana rehetra anohanan'ny WebAuthn izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'izany ny browser sy ny fampiharana amin'ny sehatra Apple, saingy ny fanarahana fenitra feno dia mbola lavitra ny fananganana azy. Mbola misy taona vitsivitsy hampiharina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Apple te-hanala ny teny miafina ao amin'ny macOS noho ny tenimiafinao